Guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in la badalay xaruntii lagu qaban lahaa doorashada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaGuddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in la badalay xaruntii lagu qaban lahaa doorashada
February 5, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddiga doorashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in la badalay xaruntii lagu qaban lahaa doorashada.
Guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in laga wareejiyay xarunta tababarka ciidamada booliiska ee Janaraal Kaahiye oo loo wareejiyay xarunta ciidamada cirka ee Afisyooni, halkaas oo u dhaxaysa garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan iyo xarunta tababarka ciidamada booliiska ee Janaraal Kaahiye.
Cabdiraxmaan Bayle ayaa sheegay in ay badaleen halka markii hore la qorsheeyay in lagu qabto doorashada kadib markii ay cabasho katimid qaar kamid ah musharixiinta madaxweynenimada Soomaaliya.
Doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa la qorsheeyay in ay dhacdo 8-bishaan Febaraayo.